…नत्र मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ-राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Homeअन्तरवार्ताअन्तरवार्ता…नत्र मधेस नेपालबाट छुट्टिएर अलग देश बन्छ-राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष, सद्भावना पार्टी
Thursday, 22 October 2015 15:46	Rate this item
तपाईंहरुले आफूलाई जतिसुकै मधेसका ठेकेदार दाबी गरे पनि निर्वाचनमा ९० प्रतिशत मधेसी जनताको मत पाउने त अरु नै छन् ? मधेसी जनताले चुनावमा मधेसविरोधीलाई किन जिताएर पठाए त ?
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी गणितका आधारमा अघि बढ्न खोजेका छन् । त्यो बाटो गलत छ भन्नुभयो । राजदूतसँग कांग्रेस र एमालेले ९० प्रतिशत जनमत हामीसँग छ । मधेसी दललाई जनताले पत्याउन छाडेका छन् । हामी संविधान बनाउँछौं र होल्ड गर्छौं ढुक्क हुनुस् भनेका रहेछन् । राजदूतले स्पष्ट शब्दमा १६ बुँदे सहमतिबाट भारत खुसी नभएको बताउनुभयो । हामीले उठाएका विषयमा समर्थन जनाउनुभयो । विगतमा स्वायत्त मधेस प्रदेश दिने सहमति भएकै हो । सहमति पालना गराउन प्रयास गर्छु भन्नुभयो । हामीले उठाएका विषय आधिकारिक रुपमा भारत सरकार समक्ष पुयाउने र यहाँ पनि दलका नेतालाई बोलाएर सम्झाउने आश्वासन राजदूतबाट पाइएको छ । उहाँले भारत सहमतिमा पक्षमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र प्रधानमन्त्री नदरेन्द्र मोदीको इच्छा पनि त्यही रहेको भन्नुभयो ।	Read 2343 times	Tweet
« “सोच परिवर्तन नभएसम्म समस्या रहिरहन्छ” – मो. लालबाबु राउत गद्दी (सदस्य, वार्ता टोली, मधेशी मोर्चा)	१५–२० हजार मान्छे मारेर जनयुद्ध गरेको यही अवस्थाका लागि हो ? : राजकुमार लेखी »